Faah faahin ka soo baxaya weerar lagu diley xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Hirshabelle | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Faah faahin ka soo baxaya weerar lagu diley xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka...
Faah faahin ka soo baxaya weerar lagu diley xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Hirshabelle
Waxaa soo baxaya faahfaahino dheeraad ah oo ku saabsan weerar lagu qaaday gaadiid ku sii jeeday magaalada Muqdisho kuwaasi oo ay wadada u galeen maleeshiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab.
Labo kamid ah xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabelle,lix askari oo ka mid ah ciidamada Milatariga iyo guddoomiyihii degmada Raage-Ceelle ayaa lagu diley weerar gaadmo ah oo lagu qaaday gaadiid ay la socdeen xilli ay marayeen Il-Baq oo ah meel howd ah oo u dhexeysa deegaanada Qalimow iyo Gololey oo ka tirsan degmada Balcad ee gobolka Sh/dhexe.
Xildhibaanada lagu diley weerarkan ayaa magacyadooda lagu kala sheegay Ismaaciil Muumin Hilowle iyo Sheekh Daahir Mukhtaar, waxaa sidoo kale weerarkaasi lagu dilay Guddoomiye kuxigeenkii Raage Ceelle Muuse Cabdule Maxamed Muuse Afweyne, iyo mid kamid ah saraakiisha ciidamada dowlad goboleedka Hirshabelle oo magaciisa lagu soo gaabiyay Xasan Dhagey.
Weerarkan ayaa waxaa sheegtay ururka Al-Shabaab iyadoo warbaahinta taageerta ururka Al-Shabaab ay qoreen in weerarkan ay ku dileen 12 askari iyo labo ka mid ah xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabelle.
Ma jiro illaa iyo hadda wax war ah oo ka soo baxay dowlad goboleedka Hirshabelle oo la xiriira weerarkan qasaaraha uu ka dhashay hase yeeshee waxaa goobta uu weerarku ka dhacay gaaray ciidamo gurmad ah iyo qaar ka mid ah xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabelle.
Ururka Al-Shabaab ayaa kordhiyay weerarada ay ugaga soo horjeedaan ciidamada dowlada iyo AMISOM tan iyo bilowgii bishan barakaysan ee Ramadaan.